အရောင်အပြည့် LED display SMD video wall ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း? - တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးငှားရမ်းခမှာ ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုနံရံကပ်စက်ရုံ
အရောင်အပြည့် LED display video wall billboards ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း?
1. မြင်ကွင်းကျယ်ထောင့်ရှိတယ်. မျက်နှာပြင်အတွက်ငါးပိမျက်နှာပြင်ပြသမှု, ၎င်းထက်ပိုကြည့်နိုင်သောရှုထောင့်ရှိသည် 110 အလျားလိုက် ဦး တည်ချက်ဒီဂရီများနှင့်ဒေါင်လိုက် ဦး တည်ချက်၌တူညီသောစွမ်းဆောင်ရည်. များစွာသောပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၌, ဤမျှကြီးမားသောကြည့်ရှုထောင့်သည်အလွန်အားသာချက်ရှိသည်.
2. အလင်းဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ပတ်သက်၍, အပြာရောင်၏တောက်ပမှု, အနီရောင်နှင့်အစိမ်းရောင် LED များသည်ထောင့်အားလုံးမှတူညီသည်. ၎င်းသည်အရောင်ပြည့် LED display မျက်နှာပြင်ကို၎င်း၏ကစားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသရန်ပိုမိုပြည့်စုံစေနိုင်သည်. မည်သည့်ရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့်အကောင်းဆုံးအရောင်ရုပ်ပုံလွှာကိုခံစားနိုင်သည်, သမားရိုးကျတိုက်ရိုက် plug-in မီးလုံးအစား bead display screen သည်ကြီးမားသောထောင့်ချိုးမှဖြစ်သည်, အရောင်မမှန်တာပြဿနာရှိတယ်.
3. အလင်းရောစပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ၎င်း၏သုံး in one chip design structure ကြောင့်, အလွန်သေးငယ်သောအကွာအဝေးတစ်ခုနှင့်ချစ်ပ်ကိုယ်ထည်သည်တူညီသောအထောက်အပံ့ခွက်တွင်အလင်းရောစပ်နိုင်သည်, ဒါက, အနီရောင်, အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်ချစ်ပ်များသည်ပေါ့ပါးသောပုတီးစေ့တစ်ခုဖြစ်သည်, သာမန် led သုံး chip သုံးခုနှင့်ကွဲပြားသည်. ကွဲပြားခြားနားသော LED အလင်းပုတီး၌, အလင်းပုတီးသုံးလုံးသည်အလင်းရောစပ်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, အလင်းရောစပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းသည်. မင်းသေသေချာချာကြည့်ရင်, watch paste screen display သည်ပိုမိုကြည့်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်.
4. ယှဉ်တွဲပြောရရင်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်သုံးခု၌တစ်ခုဖြစ်သည်, SMD သည်အလွန်သေးငယ်လိမ့်မည်. တိုက်ရိုက်ရလဒ်မှာတောက်ပမှုသေးငယ်သည့်ဧရိယာနှင့်အနက်ရောင်ဧရိယာကြီးတစ်ခုရှိသည်, ရလဒ်သည် screen display ၏အလွန်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်.
5. ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍, အရောင်အပြည့် LED display ပါသောမျက်နှာပြင်သည်မြင့်မားသောအလိုအလျောက်ရှိသည်. ၎င်းကိုအလိုအလျောက်စက်အပြည့်ဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်. ၎င်းတွင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားမှုနှင့်ထူးချွန်မှုနှုန်းရှိသည်. ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအချိတ်အဆက်များနှင့် ပတ်သက်၍, ၎င်း၏အရည်အသွေးသည်လိုင်းမီးများပါ ၀ င်သော LED အရောင်အပြည့်ပြသမှုထက်သာလွန်သည်.
6. ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်, အလွန်ပေါ့ပါးသည်, သေတ္တာထဲတွင်သုံးသောအလူမီနီယံအလွိုင်းပစ္စည်းများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရှိသည်. ၎င်းသည်အလေးချိန်ပေါ့ပါးရုံသာမက, ဒါပေမယ့်လည်းအရမ်းလှတယ်. ရေရှည်သုံးပြီးနောက်, ပုံပျက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်. ထုတ်ကုန်များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုငှားရမ်းသောကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးအတွက်၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသောသုံးစွဲမှုတန်ဖိုးရှိသည်’ ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ယူမှု.
ဤအရောင်အပြည့် LED display တပ်ဆင်မှုတွင်ချို့ယွင်းချက်များရှိနေသော်လည်း, ဥပမာ, ၎င်း၏တောက်ပမှုသည်အခြားထုတ်ကုန်များထက်နိမ့်သည်, ၎င်းရဲ့ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်လည်းပိုဆိုးပါတယ်, ကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍, ဤထုတ်ကုန်သည်ရှုထောင့်များစွာ၌ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်, ၎င်း၏အားသာချက်များသည်၎င်း၏အားနည်းချက်များထက်သာလွန်သည်. ၎င်းသည်ဤထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ရန်ထိုက်တန်သေးသည်.